ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ရွှေ သံမဏိစိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်သားအဖ
အချိန်ကအတော်ကြာခဲ့ပေမယ့် မတော်မတရားတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရခဲ့တဲ့ အချိန်မို့ လို့ဒီလိုတော်ဝင်မိသားစုလေးရဲ့ ပုံတွေက အခုအချိန်မှာ ရွှေလိုရှားနေပြီပေါ့။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိမိသားစုလေးနဲ့ ဘဲ နေလိုကြတာဓမ္မတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို သားအဖရဲ့သံမဏိစိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်နေမ၀င်တော့မယ့် စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်တွေက ကမ္ဘာမှာရှားမှရှားပါဘဲနော့။ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ တပ်မတော်ရဲ့ အမိ အဖတစ်ဦးပါ။သူတို့ သားအဖရဲ့ နေမ၀င်အင်ပါယာစိတ်ထားတွေက ဘယ်မှာမှရှာမရဘူးဆိုတာ မိတ်ဆွေတွေသိထားစေချင်ပါတယ်။အခုတော့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ဦးအာင်ဆန်းမရှိပေမယ့် သမီးရှိနေသေးတာဘဲ။ ဒီလိုတော်ဝင်အမေကိုဝိုင်းရံကြရမှာ အတွေးမမှားစေချင်ဘူးကိုယ့်လူတို့ ရေ.။မေမေစုကတော့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အရပ်ရောက်ရောက်ပန်းပန် နေအုံးမှာဘဲ ။ဘယ်လိုဘဲ မီဒီယာမှာ တိုက်ကြခိုက်ကြပါစေ ဘာမှမှုစရာမရှိပါဘူး.။ကမ္ဘာသိ မြန်မာတွသိ လူသိ နတ် တွေသိတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေသိတဲ့ ပင်တိုင်စံ ဂန္တ၀င်ထဲက အမေစုလို ကိုယ်ကျင့်တရားမြင့်မြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းအရည်အသွေး မြှင့်တဲ့ တော်ဝင်သဇင်ပန်း ဒီရွှေ မိသားစုလေး ကတော့ ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာအစဉ်အမြဲ ရင်ထဲမှာ အချိန်တိုင်းအမြဲဆိုသလိုဖူးပွင့်ဝေဆာနေအုံးမှာအသေချာလို့ ဆိုရဲပါတယ်။ကျနော်ယုံအောင်မရေးတတ်ပါဘူး လွမ်းအောင်တော့ ချွဲပြပါ့မယ်.။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် အမေစု ကို ၀ိုင်းရံကြပါ" လို. တစာစာအော်ပြီး အမေ. ရင်ဘက်ကို ၀ိုင်းကန်ကြတဲ. အဖြစ်တော. မလုပ်ကြစေချင်ပါ အမေက NLDပါတီတစ်ခုထဲအားကိုယ်စားပြုနေသောသူမဟုတ်ရပါဘူးဗျာတကမ္ဘာလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ ရဲ့မျှော်လင်ခြင်းရှင်သန်ခြင်း ရောင်ခြည်အမေပါဗျ. ဒီလိုမျိုးပြည့်စုံတဲ့တော်ဝင်မိသားစု ပုံလေးအောက်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ စာညွှန်းလေးပေးစေ့ချင်ပါတယ်